World Wide Web နှစ်သုံးဆယ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် (သို့ မဟုတ်) အင်တာနက်သမိုင်း တစ်လျှောက်က အမှတ်တရများ။ - Sharemal
ဒီကနေ့ သိလိုသမျှအားလုံးကို အလွယ်တကူ အင်တာနက်မှာ ရှာလို့ ရအောင် စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူသာမရှိရင် လူတွေ ဒီနေ့ ခေတ်မှာ အင်တာနက်မှာ သိလိုသမျှကို အလွယ်တကူ သိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ ပုံပြင်လေးက ဒီလိုအစ ပြုခဲ့တာပါ။
ဒီနေ့ မတိုင်ခင် နှစ်သုံးဆယ်တိတိမှာ Tim – Berners – Lee လို့ ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်က ဥရောပမှာရှိတဲ့ သုတေသနဦးစီးဌာနမှာ ပရောဂျက်တစ်ခုကို အဆိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ Project နာမည်က “Information Management” ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ ပညာရှင်တွေ သမိုင်းကြောင်းကို အလွယ်တကူသိစေနိုင်ဖို့ ရော မှတ်တမ်းတင်ထားဖို့ ရော ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပရောဂျက်ကို စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့အချိန်ကတော့ network ချိတ်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေသာ သုံးခွင့်ရပြီး လူတိုင်းသုံးဖို့ မလွယ်ကူသေးပါဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ လူတိုင်းအသုံးပြုလို့ ရပြီး အင်တာနက်မှာ စာကြည့်တိုက်သဖွယ် ရှာလို့ ရအောင် အချက်အလက်တွေကို လူတိုင်းတင်လို့ ရအောင် ခွင့်ပြုလာခဲ့ပါတယ်။ လူတွေက email တွေကို တစ်ဖြည်းဖြည်း စတင်သုံးစွဲ လာကြပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ www.က လူတွေရဲ့ နေ့ စဉ်ဘ၀မှာ မပါမဖြစ်နေရာကို ရောက်သွားကြပါတယ်။ A ကစပြီး Zထိမှာ အရင်ကရော အခုချိန်ထိ အောင်မြင်နေတဲ့ website တွေအကြောင်း လေ့လာကြည့်ရအောင်။
Amazon သူဌေးက ကမ္ဘာမှာ နံပါတ်၁နေရာ ရှိပါတယ်။ လမ်းတစ်လှမ်း မလျှောက်ပဲ လိုချင်တာကို အင်တာနက်အသုံးပြုပြီး website မှာ မှာလိုက်ရုံနဲ့ အိမ်တိုင်ရာရောက် လာပို့ ပေးတဲ့ ၀န်ဆောင်မှူလုပ်ငန်းကို လုပ်တဲ့ စီးပွားရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ ခေတ်မှာတော့ Amazon က ဈေးရောင်းတာမက နည်းပညာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အများကြီးလုပ်လာပါတယ်။ ဥပမာ Internet Server လုပ်ငန်းတွေနဲ့ အခြား အိမ်တွင်းသုံး နည်းပညာပစ္စည်းတွေပါ ရောင်းချလာပါတယ်။
၂၀၀၇မှာ စတည်ထောင်ခဲ့ပြီး အွန်လိုင်းမှာ ပထမဦးဆုံး သတင်းနဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို တင်တဲ့ website လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းနဲ့ အကြောင်းအရာတွေမှာ ထိပ်ဆုံးစာရင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ website လည်းဖြစ်ပါတယ်။
CSS ဆိုတာကတော့ ဒီနေ့ လူတွေအသုံးပြုနေကြတဲ့ website ကို အလှဆင် ဖန်တီးပေးထားတဲ့ အရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ webpage ကို ဒီဇိုင်းအလှတွေနဲ့ ဖန်တီးတဲ့နေရာတွေမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ website တစ်ခုရေးရာမှာ မပါမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ CSS က www. ရဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ဖန်တီး တိုးတက်လာတဲ့ အရာဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
Dril ဆိုတာက ဇာတ်ကောင်တစ်ခုရဲ့ နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ သူက အင်တာနက်မှာ Twitter ကိုတော်တော်အသုံးပြုပြီး ဟာသတွေကို မျှဝေပါတယ်။ အမေရိကန်မှာတော့ လူကြိုက်များတဲ့ ဇာတ်ကောင်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
eBay ကတော့ သင်ကိုယ်တိုင် သုံးပြီးသားပစ္စည်းတွေကို ရောင်းလို့ ရတဲ့ online ဈေးဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း ဈေးသက်သာတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ၀ယ်ယူလို့ရတဲ့ နေရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ပစ္စည်းအရောင်းအ၀ယ်ကို eBay က တစ်ဆင့် လုပ်ကြပါတယ်။
ဓါတ်ပုံကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့လူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး website ဖြစ်ပါတယ်။ Flickr ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်က စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အဲ့ခေတ်အချိန်တုန်းက digital camera တွေပဲ ရှိတာကြောင့် သေချာရိုက်ရပြီး ပုံတွေကို တင်ရပါတယ်။ ဓါတ်ပုံပညာကို လေ့လာနေသူများအတွက် သင့်လျော်တဲ့ အကောင်းဆုံး website လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခေတ်မှာတော့ ဖုန်းတွေပေါ်လာပြီး ဓါတ်ပုံ အလွယ်တကူ ရိုက်နိုင်တာကြောင့် instagram, facebook တို့ က နာမည်ကြီးလာပါတယ်။
Internet Archive (Internet စာကြည့်တိုက်)
Know Your meme (ခေတ်ပေါ် ဟာသများ website)
Live Journal ( ကိုယ်ပိုင် ဂျာနယ်များ စုစည်းရာ website)
Map Quest (မြေပုံ အညွှန်းပြသော website)
Netflix (ရုပ်ရှင်များကို အွန်လိုင်းတွင် အလွယ်တကူ ကြည့်နိုင်သော website)
Ok Cupid (အောင်သွယ်တော် ၀န်ဆောင်မှူ website)
Pornhub (အပြာကားများ စုစည်းရာ website)
QWOP (အင်တာနက် အသုံးပြု၍ ဆော့ရသော game တစ်ခု)
Reddit (သိချင်တာကို မေးမြန်းနိုင်ပြီး အမေးအဖြေလုပ်နိုင်သော website)
Stumble Upon (လူမှူကွန်ရက် website)
Tim-Berners-Lee (www. ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူ)
Urban Dictionary (အွန်လိုင်း အဘိဓါန်)
Vlogs (အင်တာနက်တွင် ဗဟုသုတအကြောင်းရာများ ဆွေးနွေးသော video)
Wikipedia (စွယ်စုံကျမ်း website)
XML (လူရော စက်ရုပ်တွေပါ ဖတ်နိုင်အောင် ရေးထားသော programming language)
Yahoo (Google ကဲ့သို့ အသုံးပြုနိုင်သော Search Engine)
Zombo (animation အသေးလေးများလုပ်နိုင်သော website)
အင်တာနက်သမိုင်းတစ်လျှောက် နှစ်သုံးဆယ်မှာ နည်းပညာတွေက အများကြီးတိုးတက်လာပြီး အင်တာနက်ရဲ့ သမိုင်းလမ်းကြောင်းကလည်းတစ်ဟုန်ထိုးအရှိန်နဲ့ခရီးဆက်နေပါတယ်။ မျိုးဆက်သစ်တွေ လက်ထက်မှာတော့ အင်တာနက်ကို အမြန်ဆုံး speed နဲ့ သုံးနိုင်ပြီး အသုံးပြုဖို့ ဖုန်းတွေ၊ ကွန်ပျူတာတွေတောင် မလိုပဲ မျက်မှန်တစ်လက်လောက် ရှိရုံနဲ့ သုံးနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။